डा. केसीको अनसन स्थल सुनसान
काठमाडौं । १० औं पटकसम्म अनसन बस्दा व्यापक जनसमर्थन पाएका प्रा.डा. गोविन्द केसीले ११ औं पटकको अनसनमा सुरुवाती समयमा समर्थन पाउन सकेका छैनन् ।
अघिल्लो पटक व्यापक जनसमर्थन पाएका केसीले ११ औं अनसन सुरु गर्दा सोमबार निक्कै उत्साहका साथ समर्थकहरु अनसन स्थल पुगेका थिए । तर, मंगलबार दिउँसो अनसन स्थन सुनसान थियो ।
निशान न्युजका प्रतिनिधि अनसन स्थल पुग्दा प्रा.डा. केसी अनसन बसेको स्थलमा दुई जना निदाउँदै बसेका थिए भने केसी निदाएका थिए (हेर्नुस तस्विर) ।
अघिल्ला अनसनमा प्रारम्भदेखि नै अनसन स्थल भरिभराउ हुने गरेकामा यो पटक त्यस्तो नदेखिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । सोमबार भने केसीको समर्थन गर्न जानेको लर्काे थियो । मंगलबार भने दुई जना व्यक्ति विरामी कुरुवा बसेझैं निदाउँदै बसेका थिए ।
डा. केसीले माथेमा प्रतिवेदन र आफूहरूले दिएका सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेका अनियमितता रोक्न माग गर्दै आमरण अनसन सुरु गरेका थिए । सरकार र सम्बद्घ निकायलाई तत्काल ६ वटा काम गर्नुपर्ने दुई सूत्रीय माग अघि सार्दै आएका छन् ।
सोमबार दिउँसो ४ बजेदेखि आफ्नो माग पूरा गराउन दवाद दिने गरी आमरण अनसन थालेका थिए । उनले यसअघि १० पटकसम्म अनसन बसिसकेका छन् । डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका माग राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ३१ असारसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । तर, सरकारले कुनै वास्था नगरेपछि फेरि सत्याग्रह गर्न बाध्य भएको उनले बताएका थिए ।